House Rent in Parami Residence (ID-1165) အား မရမ်းကုန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
House Rent in Parami Residence (ID-1165)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၅၃ရက်​
1 Story house for rent in Parami Residence, Mayangone Township. Land area - 6500 sqft. House has Living-room, One Master Bed-room, Four Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Four air-conditioners, water heater and generator are already included. The monthly rent price for one month of this house is - 4500 USD (Nego).
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပါရမီအိမ်ရာရှိ ငှားရန်ရှိသော တစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၆၅၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် လေးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ခုနှစ်လုံး၊ ရေပူရေအေးပေးစက်နှင့် မီးစက်များ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: House Rent in Parami Residence (ID-1165)